တရုတ်နိမ့်သောရေဖိအားက start-upelue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း - Zhongshan Gastek Home Appliance Company Limited
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်
အနိမ့်ရေဖိအားက start-upelue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်
ဤသည်နိမ့်ရေဖိအားက start-upelue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်ချက်ချင်း, အဆုံးမဲ့, On-demand ရေပူထောက်ပံ့နိုင်သည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ အနိမ့်ရေဖိအားက start-upelue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက် flameout ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စက်နှိုးပျက်ကွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အေးခဲနေသောကာကွယ်မှု, အပူကာကွယ်မှုကျော်, etc မိသားစုလုံခြုံမှုကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်။
အနိမ့်ရေဖိအား START-UP အမျိုးအစားအမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေပူပေးစက်
ရေစီးဆင်းမှု (L / min)
â –³T = 25K 5L 6L 8L 10L 12L 14L 16L
ထုတ်လုပ်မှုအရွယ်အစား 440 * 300 * 130mm 440 * 300 * 135mm 520 * 320 * 168mm 550 * 330 * 188mm 610 * 350 * 188mm 650 * 400 * 188mm 700 * 440 * 200mm
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား 525 * 360 * 200mm 525 * 360 * 200mm 630 * 370 * 225mm 635 * 395 * 245mm 710 * 410 * 245mm 745 * 455 * 250mm 800 * 495 * 260mm
G.Weight ၅.၉ ကီလိုဂရမ် ၆.၃ ကီလိုဂရမ် 8.3kgs 9.6kgs 10.5kgs 12.3kgs 14.7kgs
(20'GP / 40'GP / 40'HQ) 800pcs / 1600pcs / 1900pcs 800pcs / 1600pcs / 1900pcs 550pcs / 1100pcs / 1300pcs 490pcs / 980pcs / 1150pcs 420pcs / 840pcs / 1000pcs 350pcs / 700pcs / 810pcs 280pcs / 560pcs / 650pcs
၁။ ကျယ်ပြန့်သောအကန့်အသတ်မရှိ၊ ချက်ချင်းရေပူစွမ်းရည်သည် 5L-18L မှဖြစ်သည်
၂.၀ မီလီမီတာပါသောရေဖိအားအနိမ့်၊ နေအိမ်ဟောင်း၊ အဆောက်အ ဦး များအစရှိသဖြင့်ကောင်းမွန်သည်။
၃။ အပူလွန်ကဲမှုကာကွယ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့မှုကင်းသောလောင်ကျွမ်းခြင်းကာကွယ်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်လျှပ်စစ် pulse စက်နှိုးစက်၊ မီးလျှံကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့သောဘက်ပေါင်းစုံလုံခြုံမှုကာကွယ်ခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်းမပြည့်စုံသည့်အချိန်တွင်အလိုအလျောက်ပိတ်ပါ။
5. ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန် disply;
၆ ။ ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်စတစ်ကာများသို့မဟုတ်အလှဆင်ဘုတ်။
7. ဆောင်းရာသီ / နွေရာသီညှိနှိုင်းခြင်း၊ ရေပူအပူချိန်ကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်
ရရှိနိုင် 8. 20 သို့မဟုတ် 40 မိနစ် timer နေရာမှာ
9.2ဘက်ထရီ powered ။
hot Tags:: အနိမ့်ရေဖိအားက start-upelue အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်, လက်ကား, စျေးပေါ, လျှော့စျေး, စျေး, အနိမ့်စျေး, လျှော့စျေး, CE, စျေးနှုန်း, နောက်ဆုံးပေါ်, အဆင့်မြင့်